UMTHANDAZO KUTHIXO KWIMIZUZU EBUNZIMA YOKUXAKEKA NOKOYIKA
Ngeli xesha siza kukubonisa ukuthandaza kuThixo ngamaxesha anzima, ukuze xa uziva ukuba uza kufa isiqaqa, uthandazela ukuba ungaziva ulilolo okanye uwedwa kula maxesha anzima. Ke, ndicebisa ukuba uqhubeke ufunda ukuze uyazi.
1 Umthandazo kuThixo ngamaxesha anzima
1.2 Izicatshulwa zeBhayibhile kunye neendinyana zamaxesha anzima
Umthandazo kuThixo ngamaxesha anzima
Uninzi lwabantu ngaxa lithile ebomini babo luye lwadlula kwiimeko zokubandezeleka okukhulu kunye noloyiko, ezenza ukuba ezi meko zinganyamezeleki kwaye apho singasiboni sisisombululo kwixesha elifutshane.
Kodwa kufuneka sihlale sizikhumbuza ukuba asisodwa, ukuba sithembele kuThixo ngala maxesha angwevu kwaye akasokuze asilahle.
Kubalulekile ukuba xa sikwezi meko sifune uncedo, ukongeza ekwenzeni imithandazo eyakukunceda ube namandla, ithemba kunye nenkuthazo oyifunayo ngeli xesha.
Ngale nto umthandazo kuThixo ngamaxesha anzima, Kuya kukunceda ukuba uphakamise imimoya yakho, kwaye ikukhuthaze ukuba ube nencoko yobuqu noThixo, apho umxelela khona ukubandezeleka kwakho kwaye umnike, ukuze akwazi ukungenelela ukuze afumane isisombululo.
Emva koko, ndiza kukubonisa enye ukuthandaza kuThixo ngamaxesha anzimaNdiyathemba ukuba izokukunceda kakhulu:
"Thixo wam, ngale mini apho ndingafumani ndawo yakuzimela kula maxesha amnyama nobunzima, ndiyakucela ukuba ukhanyise undikhokele, ukwazi ukuba ndingenza ntoni ngale meko ndingaboni sisombululo kuyo".
"Ndicela uncedo lwakho olungcwele ukuze ndikwazi ukufumana indlela yokuqala ukubona ithemba."
“Ndicela ngamandla ukuba undincede kule mizuzu, ndiyathembisa ukulandela iimfundiso zakho kwaye ndingagwebi nabani na ngokwenzekileyo. Ndifuna nje isibane ukuze ndazi ukuba ndisendleleni ehamba phambili ”.
"Ndiyazi ukuba wena njengoMdali wendalo iphela unamandla okundinceda ndibone iimpendulo zemibuzo endizibuza yona kwaye andiboni ukuba ndingayiphendula njani."
"Ndidinga uncedo lwakho oluvela kuThixo ukwazi impendulo kuyo yonke into, kuba unokwenza yonke into, wazi yonke into kwaye uyayazi."
“Ndiyathembisa ngokuqinisekileyo ukuyamkela le meko, ukuba esi sisicwangciso sakho sokufundisa kum nakwam. Ndiyabulela ngoncedo lwakho oluboniswe ngala maxesha anamandla, ndiyathemba ukuba isikhokelo sakho ”.
Thandaza oobawo bethu babini ngombulelo ngoncedo lukaThixo wethu kunye nesichotho somariya. Kwaye emva koko, wenza isicelo esithile, ofuna ukusenza kumdali wethu, ukukubonisa uncedo oluvela kuThixo.
Khumbula ukuba yonke imithandazo oyenzayo kuThixo kufuneka yenziwe ngokholo olupheleleyo lwehlabathi, ukuze imithandazo yakho iviwe. Kananjalo ungawuthandaza lo mthandazo okanye nantoni na evela entliziyweni yakho ukuveza inkxalabo yakho kumdali wethu.
Imithandazo sisixhobo esenzelwe ukuba abantu babonakalise inkxalabo yethu kuThixo wethu, ke inokuthi ithathelwe ingqalelo njengengxoxo phakathi kwaba babini; apho uxelela onke amaxhala akho, ulonwabo kutata. Ukuze oku kungenelele ebomini bethu, ngokusebenzisa abathunywa abangaboneleli ngoncedo siludingayo kwaye silucela ngokungxamisekileyo.
Aba banokuba ngabantu, into oyivayo, into oyibonayo ekunceda ukusombulula ezinye zeengxabano zakho kwaye xa ezo zinto zisenzeka. Yimisebenzi kaThixo kuthi bantwana bakhe kwaye kufuneka simbulele ngoncedo lwakhe ngalo lonke ixesha apho uloyiko kunye nosizi zisingenela khona.
Kwaye asiboni kakuhle, inokuba kwenzeka ntoni kusapho lwethu, kwi el mundo, emakhayeni ethu, emsebenzini okanye naphi na apho sikhona. Kodwa, ukuba siziva sisodwa ngokupheleleyo, ngaphandle kokukhanya kwethemba okusixelela ukuba masihambe ngaloo ndlela yindlela yethu.
Nanini na xa sifumana olo ncedo okanye inkuthazo ebonakalisiweyo kuthi, kufuneka simbulele umdali wethu ngokusinceda ukuba sizibone ezinye iindlela zokucinga kwezi meko, apho uxinzelelo kunye noloyiko lwaluphumelela. Kwaye ayikuvumeli ukuba ubone ukuba kukho ezinye izisombululo malunga noku.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Umthandazo wokususa uloyiko.
Izicatshulwa zeBhayibhile kunye neendinyana zamaxesha anzima
Apha siza kukufundisa ezinye zezicatshulwa zeBhayibhile kunye neendinyana eziza kukunceda kunye ne umthandazo kuthixo ngamaxesha anzima:
UIsaya 43: 1-3 Musa ukoyika, ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela; Ndikubize ngegama. Xa uthi uwele emanzini, ndoba nawe; nasemilanjeni, ayisayi kukuntywilisela; xa uthi uhambe emlilweni, akuyi kurhawuka, nelangatye lingakutshisi. Ngokuba mna, Yehova, ndinguThixo wakho, mna, Ngcwele kaSirayeli, ndingumsindisi wakho;
Apha bayasichazela ukuba uThixo unathi ngalo lonke ixesha. Kuyo yonke imiceli mngeni kunye neemeko ubomi ngokwazo ezisinika zona, ke akufuneki sikoyike.
KwabaseFilipi 4: 12-13 Ndiyayazi ukuba kunjani ukuswela, kwaye ndiyazi ukuba kunjani ukwanela. Ndiyifundile imfihlelo yokonwaba kuyo nayiphi na imeko. Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.
Apha uThixo usifundisa amacala amabini engqekembe, eneemfuno kwaye enayo yonke into oyifunayo. Kwaye usixelela ukuba enye yeemfihlelo zokonwaba kuyo nayiphi na imeko kukwazi ukuba uhlala ekulungele ukusinika amandla Kuyimfuneko ukuya phambili.
IMizekeliso 18: 10 Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni.
Xa igama lakho enkosini yethu uThixo wethu. Uya kuba sisiseko esikhuselekileyo kuzo zonke iimeko, ke nabani na omfunayo ngokusuka entliziyweni uya kuhlala ekhuselekile.
Ukugqiba eli nqaku nge ukuthandaza kuThixo ngamaxesha anzimaSiyakumema ukuba nokuba uzifumana ukwimeko enjani, khumbula ukuba awuwedwa, uThixo ubambe isandla sakho ukuze ungatyhafi, ukuze uziphumelele ezi mvavanyo kwaye uphume kuzo ngempumelelo.
Kodwa ngolweyiseko lokuba le nto izise imfundiso kuwe, kuya kufuneka uyazi ukuba yayiyintoni ukuze ungaphindi uyiphinde.
Khumbula ukuba ubomi bethu sisikolo. Apho yonke imihla sifunda kuthi, kwabanye nakwizinto zonke esihamba kuzo ebomini.